Uru nke vidiyo maka Search, Social, Email, Nkwado ... na More! | Martech Zone
N'oge na-adịbeghị anya anyị gbasaa ndị otu anyị na ụlọ ọrụ anyị ka ha tinye onye na-ese vidiyo oge, Onye na-ese Harrison. Ọ bụ mpaghara anyị maara na anyị enweghị. Ọ bụ ezie na anyị na-ede edemede ma na-eme vidiyo vidiyo dị ịtụnanya yana ịmepụta pọdkastị dị ukwuu, ịde blọgụ vidio anyị (vlog) adịghị adị.
Vidiyo adịghị mfe. Ọnọdụ ọkụ, ogo vidiyo, yana ọdịyo siri ike ịme nke ọma. Naanị anyị achọghị ịmepụta vidiyo nke nwere ike ọ gaghị ahụ ma ọ bụ na anyị agaghị achọpụta, anyị chọrọ ịbụ onye ike na ụlọ ọrụ ahụ ma nwee ndozi-style vidiyo unu niile na-enwe ọ andụ ma nwekwuo uru ịmụ ihe si. Anyị goro ụfọdụ ndị na-ese vidio dị ịtụnanya maka ndị ahịa anyị, mana anyị chọrọ nkwekọ nke otu onye otu ebe na blọọgụ iji mepụta vidiyo dị ịtụnanya mgbe niile n'ofe isiokwu nwere mmasị.
Anyị anọghị naanị anyị. 91% nke ndị ahịa ahịa na-eme atụmatụ ịbawanye ma ọ bụ jigide itinye ego na vidiyo na afọ a. Igodo nke usoro vidiyo anyị bụ mkpuchi ọwa ọzọ ọ ga-enye ma igwe ọchụchọ yana na nyocha vidiyo, ịghara ịkọ njikọ mmadụ nke vidiyo na-enye. Uru ya abụghị ihe nzuzo:
76% nke ụlọ ọrụ achọtala vidiyo ha na-ewepụta ezigbo nloghachi na itinye ego
93% chọpụtara na vidiyo emeela ka onye ọrụ nwekwuo nghọta banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha
62% ekwuola na iji vidiyo mee ka ọnụọgụ nke okporo ụzọ ha nweta
64% ekwuola na ojiji nke vidiyo emeela ka ahịa buru ibu
Ihe omuma a sitere na Take1, Otu vidiyo gị nwere ike isi bụrụ ezigbo enyi Enyocha Search, na-agabiga plethora nke uru ndị ọzọ. Site na mgbasa ozi, nkwado ndị ahịa, ntụgharị, ịkekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe, yana ọbụna meziwanye ahịa email gị, vidiyo nwere mmetụta na ihe niile gbasara mbọ ị na-agba n'ịntanetị.
Chọpụta na infographic anyị n'okpuru nke nwere nnukwu ozi gụnyere otu ndị ahịa na-eji vidiyo ugbu a, ụzọ iji bulie ewu ewu nke ọdịnaya vidiyo gị yana ike ịkekọrịta nke ịkekọrịta (gbakwunyere, ọtụtụ akụkọ na-akpali akpali). Were 1
Were1, ọrụ ndozi, na-emekwa ka okwu gbara ọkpụrụkpụ maka captioning mechiri emechi, transcripts na ịgbakwunye ndepụta okwu na vidiyo gị. Nke a bụ infographic:
Tags: mechie ihe nchịkọtavidiyo vidiyovidiyo facebookVidio AhịaAtake1transcriptvidiyo ccvidiyo vidiyovideo ndepụta okwuntụgharị vidiyoyoutube